राजसंस्था समाप्तीको कुरा काल्पनिकः पूर्व राजा(अन्तर्वार्ताको पूर्णअंशसहित) | नेपालको सम्झना
Browse » Home » खबर सेरोफेरो » राजसंस्था समाप्तीको कुरा काल्पनिकः पूर्व राजा(अन्तर्वार्ताको पूर्णअंशसहित)
राजसंस्था समाप्तीको कुरा काल्पनिकः पूर्व राजा(अन्तर्वार्ताको पूर्णअंशसहित)
PLEASE CLICK PHOTO WATCH VIDEO.
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजसंस्था समाप्तीको कुरा ‘काल्पनिक’ मात्र भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘यो ‘हाइपोथेटिकल’ कुरा हो, राजसंस्था होस् वा राष्ट्रिय सवालमा जनताको विचार नै महत्वपूर्ण हुन्छ,’ बुधबार एभिन्यूज टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘जनता जनार्दन नै हुन्छन् ।’
एभिन्यूज टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा उनले राजसंस्था बिदाइ गर्ने निर्णयमा पुर्नविचार गर्नुपर्ने बताए । ‘जनताले यही चाहन्छन्, यही (राजसंस्था हटाउनु) ठीक छ, यही बाटो नै हिड्नुपर्छ भन्ने हो भने ठिकै छ,’ ‘उहाँहरु (जनता) लाई कहिँ न कहिँ चित्त बुझेको छैन भने जसले शासन गरेका छन्, जनताको कुरालाई नै मान्यता दिनुपर्छ ।’
पूर्व राजाले राजसंस्था ब्युँताउन पर्दा पछाडी आफूले कुनै पनि भूमिका नखेलेको दाबी गरे । ‘यसो भए धेरै अगाडी, धेरै कुरा गरिसक्ने थिएँ, त्यो न चाहना छ न नियतनै,’ उनले प्रष्ट्याए, ‘देशमा शान्ति होस् भनेर नै छाडेको हो, जनताले यो बुझिरहेका छन् मैले जति बुझेको छु, त्यो मैले राखेको छु ।’
ज्ञानेन्द्रले नेपालको इतिहासमा राजाहरुले कहिल्यै पनि शक्ति हातमा लिन नखोजेको जिकिर गरे । ‘यो भ्रम मेटाउनु पर्छ, राजाले कहिल्यै शक्ति खोजेनन् राजाले देउता भनेर बोलेका पनि छैनन्,’ उनले थपे, ‘यो जनताको विश्वासले भएको हो ।’ पूर्व राजाले आफ्नो बहिर्गमनपछि पनि जनतामाझ जान अप्ठेरो नभएको बताए । बुधबार जनकपुर आउँदा जनताले दर्शाएको सदभावप्रति आफू खुशी भएको उनको भनाइ थियो ।
रामनवमीको अवसरमा जनकपुरको रामजानकी मन्दिरमा पूजा गर्न पूर्व राजा बुधबार बिहान बुद्ध एयरबाट जनकपुर गएका थिए । जनकपुरमा राजावादीहरुले उनको पक्षमा नाराबाजी गरेपछि उनले मन्द मुस्कानका साथ अभिवादन फर्काएका थिए ।
नेपालबाट राजसंस्थाको अन्त्य गरेर जनताले आफूलाई पनि सन्देश दिएको पूर्व राजाको भनाइ छ । ‘यो एउटा पाठ हो, जनताले हामीलाई पनि सन्देश दिएका हुन्,’ उनले भने, ‘राजाहरु सक्रिय नभएको जनताले खोजेको हो कि ।’ उनले राजाले भनेको अभिभावकको रुपमा सवै काम गर्नुपर्ने बताए । ‘देशका लागि जे गर्नुपर्छ त्यो समयमा उठाउनै पर्छ,’ पूर्व राजाको कथन थियो, ‘सर्वसाधारणको सुरक्षा र रक्षा गर्ने अवस्था पनि आउँछ ।’
पूर्व राजाले दरबार हत्याकाण्ड र माघ १९ को कदमले राजसंस्थालाई अप्ठेरो पारेको पनि स्वीकार गरे । ‘सर्वप्रथम त म (दरबार हत्याकाण्ड भएका बेला) काठमाडौंमा थिइनँ, जति हाम्रा परिवार छन् त्यो दुर्घटनामा बाँचेर आएका उहाहरुको उहाँहरुले भनेको कुरा सुन्दादेखि तथ्य सथ्य अर्के जस्तो लाग्छ, जून बाहिर आएको पनि हो,’ उनले भने, ‘राजसंस्थालाई केही न केही रुपमा माघ १९ ले पनि अप्ठेरो पारेकै हो ।’
पूर्व राजाले जंगलमा बस्दा शान्त भए पनि देशको बारेमा चिन्ता लागिरहेको बताए । ‘जंगलमा बस्दा फाइदा पनि हुन्छ, शान्त पनि छ, तर अलि चिन्ता चाँही छ राष्ट्र र सर्वसाधारणको,’ उनले भने । ज्ञानेन्द्रले आफ्नो नेपाल छाड्ने योजना नरहेको सुनाए । ‘नेपालमै बस्छु नेपालको सेवा गर्ने, नेपालीको सेवा गर्ने नै योजना छ, पहिलो पनि त्यही थियो अहिले पनि त्यही छ,’ उनले भने ।
राजतन्त्र समाप्त भयो भन्नु काल्पनिक कुरा मात्रः पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र
अहिले देश जुन मोडबाट गुजि्ररहेको छ, यतिखेर के महसुस गरिरहनु भएको छ ?
बहुमत जनताले के खोज्छन् त्यो नै हाम्रो चाहना हो । मेरो पनि त्यही हो । अहिले देशमा सर्वसधारणको जीउ धनको सुरक्षाको खाँचो छ भन्ने मलाई लागेको छ । देशमा शान्ति होस् नेपाली जनताले के खोजेका छन् त्यही होस् । सबैलाई अटाउने ठाउँ होस् र हाम्रा पूर्खाहरुले जसरी यो देशलाई एकताको सुत्रमा बाँधेका थिए त्यो माला नचुँडियोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ ।
राजतन्त्रको अन्त्यपछि देश कतातिर जाँदै गरेको अनुभूति हुन्छ, दण्डहीनता र अराजकता बढेको छ, दलहरु सहमतिमा आउन सकेका छैनन्, हालै मात्र शिखरपुरुष गिरिजाबाबुको निधन भएको छ, यस्तो अबस्थामा नेपालको राजनीति कतातिर जाँदैछ भन्ने लाग्छ ?
यो कुरा मैले भन्नु भन्दा पनि सर्वसधारणहरुलाई सोध्नु र उहाँहरुबाट यसको जवाफ लिनु फाइदा जनक हुन्छ ।
नेपाली जनताले पुनः राजतन्त्र पुनःस्थापित गर्न चाहे भने तपाईं तयार हुनुहुन्छ ?
यो ‘हाइपोथेटिकल’ कुरा भयो । राजतन्त्रको विषयमा होस् वा अन्य कुनै पनि राष्ट्रिय सवालमा होस् । जनताको विचार, भनाइ, जनता जनार्दन नै हुन्छन् । त्यसैले सबैले त्यो मान्नै पर्ने हुन्छ ।
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र बाहिर बसेर शक्तिको राजनीति गरिरहेको छ भनेर भन्नेहरु पनि छन् । तिनीहरुलाई के जवाफ दिनु हुन्छ ?
त्यसो भए त धेरै अगाडि धेरै कुरा भइ सक्थ्यो । त्यस्तो हाम्रो बिचारै छैन । नत त्यस्तो नियत नै छ । देशमा अमनचयन र शान्ति होस् भनेर नै केही नमानेर हामीले छाडेका हौं । नेपाली जनताले त्यसको मान्यता, मुल्य बुझेका छन् जस्तो लाग्छ । जनतालाई छाड्नुपर्छ यस्तो प्रश्न ।
तपाईंका दिन कसरी वितिरेहेको छ ?
के भन्ने ? जंगलमा बस्दाखेरी फाइदा छ । शान्ति पनि हुन्छ । विचार गर्ने मौका पनि पाउँछ । तर, अलि चिन्ता चाँही राष्ट्रकै छ । राष्ट्रिय एकता कै छ । सर्वसाधारणले राम्रोसँग, सुखीसँग बस्न पाओस् भन्ने छ । मेरो दिनचर्या पनि यही छ ।
नेपाली जनताले कुनै वेला निक्कै सम्मान गथ्र्यौ राजतन्त्रलाई, भगवानकै रुपमा मान्थे । तर, यतिवेला समय र परिस्थिति त्यस्तो रहेन । एक जना आम नागरिक जसरी नै हामीसँग आउनु भयो, एक जना शक्तिशाली राजा र अहिलेको अवस्थाबीच के भिन्नता पाउनु हुन्छ ?
एक दुईवटा भम्र चिर्नु छ । कहिल्यै पनि शक्ति खोजेको छैन राजाहरुले । कहिल्यै पनि कुनै पनि राजाले म देउता हो भनेर बोलेको पनि छैन । त्यसैले त्यो त जनताको माया र विश्वासले भएको कुरा हो जस्तो लाग्छ । मलाई व्यक्तिगत रुपमा कहिल्यै पनि जनताको माझमा अप्ठ्यारो महसुस भएन । पहिले पनि थिएन, अहिले पनि छैन । आज पनि भनौं हामी जानकीको नगरी जनकपुरमा आइ रामनवमीको दिनमा जानकी मन्दिरमा दर्शन गर्न पाउँदा जुन स्नेह, माया, ममता सर्वसाधारणबाट पाएँ, यसको मैले जवाफै दिन सक्दिन । त्यो त, जे जति, जसो बुझेको छु मैले भित्र राखेको छु । मैले बुझेको छु । भएजति जनतालाई मैले धन्यवाद दिनु पर्छ । अरु के भनौं ।
नारायणहिटी काण्ड र माघ १९ को ‘कु’ पछि राजतन्त्रलाई नेपाली जनताले बिस्तारै कम कम माया मार्दै गएको त सत्य हो नि ?
दुईवटा कुरा त्यसमा । एउटा पाठ जनताले सिकाउँछ पनि र नेतावालाहरुले सिक्नु पर्छ । जनताले हामीलाई त्यस्तै एउटा सन्देस दिएको हो की ? राजाहरु बरु सक्रिय नभएकै जनताले खोजेको हो की ? त्यही एउटा पाठ मैले सिकेको छु । तर, जनताले बिर्सन हुन्न । राजाले अभिभावकको रुप लिनु पर्छ । कहिले त्यसका लागि जे गर्नु पर्छ त्यो समयमा कदम उठाउनै पर्छ ।
सर्वसधारणको सुरक्षा, रक्षा गर्नुपर्ने अबस्था आउँछ । त्यो समयको विचार गर्दा परिस्थिति अर्कौ थियो । त्यो पछाडी फर्केर हेर्नु मात्र होइन, अगडि देश कस्तो हुन्छ ? समृद्ध, सफल त्यस्तो देश हामीलाई चाहिएको छ । त्यतातिर हामी सबै जुटेर जानु पर्दछ ।
दरबार हत्याकाण्ड र माघ १९ राजतन्त्र अन्त्यमा प्रमुख कारण हो भन्छन् । आजसम्म पनि दरवार हत्याकाण्डको रहस्य खुल्न सकेको छैन । यसमा के भनाइ छ ?
सर्वप्रथम म काठमाडौं मै थिइन, घट्ना हुँदा । जे जति हाम्रा परिवार छन् त्यो घट्नामा बाँचेर आएका । उनीहरुको कुरा सुन्दा तथ्य सत्य कुरा आयोगहरुबाट पनि निस्किसकेको छ । अव यि कारणहरुले राजसस्थालाई के न केही रुपमा असर पारेको हो भने त्यो अलिकति पछाडी र अगाडि हेर्दा हो/होइन भन्ने थाहा हुन्छ । यो कुरा जनतलाई छाडिदिनु पर्छ ।
राजतन्त्रको इतिहास समाप्त हुनुमा कहाँनिर के कमजोरी भयो भन्ने महसुस हुन्छ ?
समाप्त भइसकेको छ भन्ने जस्तो लाग्दैन । त्यसैले त्यो पनि अलि ‘हाइपोथेटिकल’ नै भयो । अघि भने जस्तै देशको इतिहासको पानाहरु पल्टाएर हेर्दाखेरी माथिजाने, तलजाने, भित्रिने-बाहिरिने भइरहन्छ । फेरि म दाहोर्‍याउछु, जनताले यो कुरालाई गहन र जिम्मेवारीका विचार गरेर जे निधो गर्छन् । त्यही सबैले मान्नु पर्छ ।
नेपाली जनताले राजतन्त्र हटाइसकेपछि दलहरु गठबन्धन बनाएर अघि बढ्न खोजी रहेका छन् । तर, पनि संविधान निर्माण हुन र शान्ति प्रकृया टुङ्गोमा पुग्न बाँकी छ । माओवादी र अन्य दलहरु मिलेर शासन गरिरहेका छन्, यो किसिमको शासन प्रणालीलाई के भन्नुहुन्छ ?
जनताले यही चाहन्छन् भने ठिक छ । तर, देशलाई, सर्वसाधारणलाई यही ठिक छ यही बाटो नै हिड्न सक्छ भने हामीले के भन्नु । उहाँहरुलाई चित्त बुझेको छैन, कुनै न कुनै ठाउँमा, कुनै न कुनै कुरामा भनेदेखि जस्ले अहिले शासन गरिरहेका छन् । उहाँहरुले विचार गरेर जनताको कुरालाई मान्यता दिनुपर्छ । जनताको र राष्ट्रको हितलाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ ।
तपाईंका भावी योजना अव के छन् ?
नेपालमै बस्छु । नेपालको सेवा गर्छु । नेपालीको सेवा गर्छु । मेरो योजना पहिले पनि यही थियो । अहिले पनि यही छ । भावी पनि त्यही हुनेछ
Posted by नेपालको सम्झना at 1:48 PM
Labels: खबर सेरोफेरो
0 comments to “राजसंस्था समाप्तीको कुरा काल्पनिकः पूर्व राजा(अन्तर्वार्ताको पूर्णअंशसहित)”